ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ METExpo 2019 တွင် IP Showcase ပြဇာတ်ရုံအတွက်တင်ဆက်မှုအဆိုပြုလွှာများကိုလက်ခံခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဆစ်ဒနီရှိ METExpo 2019 မှာ IP ကိုဟန်ပြပြဇာတ်ရုံအတှကျအ Now ကိုလက်ခံခြင်းတင်ပြအဆိုပြုချက်
ဆစ်ဒနီရှိ METExpo 2019 မှာ IP ကိုဟန်ပြပြဇာတ်ရုံအတှကျအ Now ကိုလက်ခံခြင်းတင်ပြအဆိုပြုချက်
Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society ရဲ့သြစတြေးလျပုဒ်မ®(SMPTE®), IP ကိုမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (ရည်ရွယ်သည်), နှင့် IABM သူတို့ဆစ်ဒနီ, 2019-17 ဇူလိုင်လအတွင်းမီဒီယာ + Entertainment က Tech မှကုန်စည်ပြပွဲ (METExpo 19) နှင့် တွဲဖက်. သြစတြေးလျအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ IP ကိုဟန်ပြစင်ပေါ်ကိုလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
METExpo 2019 မှာ IP ကိုဟန်ပြ, ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရုပ်ရှင်ထဲကနေလိုလားသူ AV စနစ်ဖို့ applications များနှင့်သုံးစွဲသူများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, ဖြတ်ပြီး Real-time များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာ၏အကျိုးကျေးဇူးများမီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့ပညာရေးနှင့်သရုပ်ပြတဲဖြစ်နှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ-based IP ကိုမှပြောင်းရွှေ့နောက်ကွယ်မှအရှိန်အဟုန်လိမ့်မယ် သေးငယ်တဲ့အဆောက်အဦများနှင့်လွတ်လပ်သောစစ်ဆင်ရေး။
ဧည့်သည်များက enabled နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ, ကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများ, နှင့်ဗိသုကာအပေါ်တင်ပြချက်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် operating, ကိုယ်တွေ့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုစုဆောင်းခြင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည် SMPTE ပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများ ST 2110 မိသားစု။
အဆိုပါ IP ကိုဟန်ပြအောက်ပါစက်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များကလွယ်ကူချောမွေ့ခံရဦးဆောင်-အစွန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်မည်ဖြစ်သည်: အ အသံအင်ဂျင်နီယာ Society က (AES), အဆင့်မြင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာအသင်း (AMWA), ဥရောပအသံလွှင့်ယူနီယံ (EBU), ရည်မှန်းချက် IABM, SMPTE, ထိုဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများဖိုရမ် (VSF) ။
ဒါ့အပြင်ယနေ့အဆိုပါစပွန်ဆာအတွက် IP ကိုဟန်ပြပြဇာတ်ရုံများအတွက်တင်ဆက်ဘို့ဖုန်းခေါ်ကြေညာခဲ့သည်။ စကားပြောအဆိုပြုချက်များအတွက်တင်သွင်းခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးနေ့ 14 ဇွန်လ 2019 ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် IP ကိုဟန်ပြရုံမှာတင်ဆက်အဆင့်ဆင့်မကြာခဏရပ်တည်မှု-အခန်းတစ်ခန်းသာလူအစုအဝေးနှင့်အတူ, 2016 ကတည်းကရှိုးမှာနေ့တိုင်းတက်ရောက်ရာပေါင်းများစွာတို့ကသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် IP ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ, METExpo2019 မှာတက်ရောက်သူခိုင်ခံ့ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ ၏သိသာထင်ရှားသောအစောပိုင်းကလေးမွေးစားခြင်း SMPTE သြစတြေးလျထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်ပေးသူများက ST 2110 ထုတ်ကုန်များနှင့်ဗိသုကာအဆိုပါအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်စက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းနှင့်အခြားကပ်လျက်စက်မှုလုပ်ငန်းများကစုပ်ယူသုံးစွဲမှုများအတွက်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ METExpo2019 IP ကိုဟန်ပြပြဇာတ်ရုံမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်, ကုမ္ပဏီများသုံးပြီးထုတ်လုပ်မှုများအတွက် IP ကိုဗွီဒီယိုနဲ့အသံအပေါ်သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အမွငျကိုဆက်ကပ်ရန်ပွိုငျဘအခွင့်အလမ်းရရှိ SMPTE ST 2110 နှင့် AES67, အဖြစ် AMWA NMOS နည်းပညာ stack ထဲမှာနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပေါ်။
အဆုံးသုံးစွဲသူများစက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့များ, ဖြေရှင်းချက်ပေးသူနှင့်နည်းပညာ developer များအားလုံး IP ကို ​​signal ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုယနေ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်, လိုလားသူ AV စနစ်, အသေးစားလွတ်လပ်သောစစ်ဆင်ရေးများနှင့်လွတ် impact နှင့်အနာဂတ်၌ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဟာသူတို့ရဲ့အသိပညာနှင့်အမြင်များကိုမျှဝေဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။
tutorial (အဆင့်မြင့်, အလယ်အလတ်အခြေခံ)
Market က / စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
point-of-အမြင် / စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု
စံချိန်စံညွှန်းများတိုးတက်မှု / update ကို
preference networks မီဒီယာ (JT-မိုင်) လမ်းပြမြေပုံအပေါ်ပူးတွဲ Task Force အပေါ်အောက်ပါနည်းပညာဒေသများနှင့်ပတ်သက်သောတင်ပြချက်များအားပေးပြီးမှလိမ့်မည်:
SMPTE Professional ကမီဒီယာကျော်ဘို့စံချိန်စံညွှန်းများ ST 2110 suite ကိုအိုင်ပီကွန်ယက်စီမံ
ထိုကဲ့သို့သော,-04 IS-05 IS,-07 IS နှင့်-08 IS အဖြစ် AMWA NMOS သတ်မှတ်ချက်များ
အချိန်ကိုက်များနှင့်ထပ်တူသုံးပြီး SMPTE ST 2059-1 / 2
configuring, ကို install များအတွက် JT-မိုင် TR-1001-1 မူဘောင်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ interconnecting
ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လိုလားသူ AV စနစ်အတွက်အဆုံးအသုံးပြုသူများနှင့်စက်ရုံအော်ပရေတာအထူးသဖြင့်အထက်နည်းပညာဒေသများ၏များထားရှိပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်သောသူတို့ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံကိုတင်ပြရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်။ System Integration, ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်ထုတ်လုပ်သူလည်းလျှောက်ထားရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ ပြဇာတ်ရုံပွင့်လင်းသော IP-based နည်းပညာများကို အသုံးပြု. မီဒီယာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တိုးတက်လာဆွေးနွေးရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သကဲ့သို့ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတင်ပြချက်များ, စိတ်ပျက်အားလျော့နေကြသည်။
အခွားသောအကြောင်းအရာများနှင့်နည်းပညာဒေသများထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်နှင့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမှာရရှိနိုင်ပါ www.ipshowcase.org/call-for-presentations/.
အဆိုပါ IP ကိုဟန်ပြ METExpo 2019 မှာ IP ကို ​​Pavilion ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတွင်ဆစ်ဒနီ၏ပြပွဲကြမ်းပြင်ပေါ်မှာနေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်အပေါင်းတို့နှင့်ဧည့်သည်များမှပွင့်လင်းကြလိမ့်မည်။ ယင်း IP ကိုဟန်ပြမှာတင်ပြချက်များနှင့်ဆက်စပ်စီးပွားဖြစ်ဆွေးနွေးမှုများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်, shell ကို-အစီအစဉ်တစ်ခွင်တစ်အရေအတွက်တဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြင်ဆင်ထားခြင်းပါလိမ့်မည်။
ယင်း IP ကိုဟန်ပြနှင့်တင်ပြချက်များအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်:
ယောဟနျသ Maizels: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
တစ်ခုဆက်စပ်ရပ်တည်ချက်, အဆက်အသွယ် booking အပေါ်သိရှိလိုပါက:
ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ရပ်များ: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]| + 6129452 7575
အိုင်ပီမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (ရည်ရွယ်ပါသည်): www.aimsalliance.org
Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က®(SMPTE®): www.smpte.org
Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (များ၏ Society ရဲ့သြစတြေးလျပုဒ်မSMPTE): www.smpte.org.au
မီဒီယာ + Entertainment က Tech မှကုန်စည်ပြပွဲ: www.metexpo.com.au
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို:www.wallstcom.com/IPShowcase/190521IPShowcase.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/IPShowcase/IPShowcaseLogo.jpg
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/IPShowcase/IPShowcase-METexpo_SMPTEheader.png
Wall Street ကဆက်သွယ်ရေး
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံနှင့်မြှား တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-06-06
ယခင်: audio / Visual Manager ကို
နောက်တစ်ခု: Alkemy X ကိုလက္ခဏာတွေဒါရိုက်တာအန်တိုနီ Pellino